Sangano reARTUZ Ronyunyuta neKwarinoti Kushungurudzwa kweNhengo Dzaro neMapurisa
Kurume 13, 2020
Mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure.
Mapurisa emuHararare amboshevedza mutewedzeri wemunyori wesangano revarairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, VaMunyaradzi Masiiwa, kukamba yeHarare Central achiti anoda kutaura nawo.
VaMasiiwa, avo vaperekedzwa negweta ravo, VaObey Shava, vesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavari kukwiririra mapurisa dare vachiapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa.
Mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vanoti VaMasiiwa vazoregwa vachienda vasina mhosva yavapomerwa kanawo magwaro avanyoreswa nemapurisa mushure mekunge aona vaine gweta ravo.
Vanoti VaMasiiwa vakasungwa gore rapera munaNyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupinda mukuratidzira kwaive kuri kunze kwemutemo.
VaMasaraure vanoti VaMasiiwa vakazogariswa mutirongo kujeri reHarare Remand Prison kwemazuva makumi maviri nematatu, asi vakazoregwa vachienda vasina mhosva yavakazopomerwa, izvo zvakazoita kuti vatorere mapurisa matanho ekuti varipwe vachiti vakatyorerwa kodzero dzavo.
Kushevedzwa kwaVaMasiiwa kunouya panguva iyo dzimwe nhengo dzesangano iri dziri kumira pamberi pematare akasiyana-siyana munyika dichipomerwa mhosva dzakasiyanasiyana.
Svondo rapera madzimai manomwe ekwaMutoko akawanikwa nedare reko asina mhosva mushure mekusungwa achinzi akanga apinda mukuratidzira kwakanga kwarongwa nesangano iri kwainzi nemapurisa kwaive kunze kwemutemo.
Nemusi weChipiri dzimwe nhengo nhatu dzesangano iri kusanganisirawo gweta ravo, VaDouglas Coltart, dzakamiswa pamberi pedare muHarare dzichipomerwa mhosva yekukanganisa runyararo mushure mekunge dzaenda pamahofisi egurukota rezvemari dzakatakura bhokisi rekuvigisa vafi dzichichema kuparara kwemihoro yevarairidzi.
Sangano iri rinotiwo mapurisa ari kuferefeta kupazwa kwemahofisi aro muHarare nekubiwa kwemafaera nevanhu vasingazivikanwe mazuva mashoma adarika.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi.
Asi VaMasaraure vanoti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhengo dzavo chete.